ဤအံ့ မခန်းဓါတ်ပုံများကိုတော့ဖြင့် တစ်နှစ်တာပါတ်လုံးရေခဲဖုံးလွှမ်းနေသောအန္တာတိက၀န်ရိုး
စွန်းဒေသမှပုံများဟု သင်ထင်ခဲ့ လျှင်သင့် ကိုခွင့် လွှတ်နိုင်ပါတယ်....
ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ ထိုဓါတ်ပုံများဟာ ယခုအခါ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း အအေးဆုံးအ
ဖြစ်အနှုတ် ၄၀ ဒီဂရီအထိရောက်အောင်အေးခဲနေသည့် ဥရောပတိုက်မှ ရှုခင်းပုံများဖြစ်နေပါ
မြစ်များ၊ ချောင်းများ၊ ရေကန်များ၊ ကမ်းခြေများအပြင် ပင်လယ်ရေပြင်များပါ ဆိုက်ဘေးရီးယား
အအေးလှိုင်းကြောင့် အေးခဲကုန်ကြလို့ ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင်ပင် ရေခဲပြင်ရှုခင်းများကို
စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း အီဆာဘာဒေသအနီးတွင် အနှုတ် ၄၀ ဒီဂရီထိတိုင်အောင်အေးသော
ကြောင့် ခရီးသွားသူများ ရေခဲပြင်ဖြစ်နေသောလမ်းကြောင်းတွင် ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ
Big freeze: Walkers brave it across the snow near Isaba in northern Spain today as temperatures plunged to nearly -40C in some parts of Europe
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဇူးရစ်မြို့ အရှေ့ ဖက် ၁၂.၅ မိုင်အကွာရှိ ဖက်ဖိကွန်ရွာကလေးအနီးရှိ
ရေခဲနေသည့် ဖက်ဖီကာစီကန်ရေပြင်ထက်တွင် လူအများပျော်ရွှင်စွာသွားလာ
Iced over: People enjoyacold winter day on the frozen Lake Pfaeffikersee, near the village of Pfaeffikon, some 12.5 miles east of Zurich in Switzerland
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊နျူချတယ်ရေကန်ကြီး၏ ဂရန်ဆန်းလှေဆိပ်တွင် သင်္ဘောငယ်လေးများကြီး
မားပြင်းထန်သည့် အအေအးလှိုင်းကြောင့် ရေခဲနေသည့် ရေပြင်တွင် ပိတ်မိနေပုံအား လူအများအံ့ သြစွာကြည့် ရှုနေကြပုံ...
Not going anywhere: Boats lie trapped in the ice on Lake Neuchatel at the port of Grandson, Switzerland, as onlookers watch in awe at the scale of the big freeze
ပိုလန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ ဘရိုနစ်စ်လာဝိုး အရပ်ရှိ ဆူလေဂျောစကီး ရေလှောင်ကန်ကြီး
၏ အေးခဲနေသောမျက်နှာပြင်တွင် ရေခဲပြင်အားလွန်ဖြင့် ဖောက်ကာ ငါးမျှားနေစဉ်..
တောက်ကာ လူပေါင်းထောင်သောင်းချီကာ အခက်အခဲတွေ့ နေကြရပါတယ်...
Braving the elements: Ice fishers angle on the frozen Sulejowski Reservoir in Bronislawow, central Poland, as freezing temperatures leaves thousands stranded without power in the Balkans
အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့ ဆင်ခြေဖုံးအရပ်တွင် တွေ့ ရသည့် သံလွင်ပင်တစ်ပင်...
ဆီးနှင်းများထူထပ်စွာကျရောက်မှုကြောင့် အီတလီနိုင်ငံတွင်လည်း အခက်
A rare piece of greenery: An olive tree on the outskirts of Rome as heavy snow caused chaos across the country
ဂျာမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဟေဒယ်ဘတ်ဒေသမှ ရေခဲနေသည့် နက်ကာမြစ်နှင့် တံတားအား
ရဲတိုက်နောက်ခံဖြင့် တွေ့ ရပုံ...
No-flow area: The castle and the old bridge are seen over the frozen river Neckar in Heidelberg, southwestern Germany, today as the Siberian chill tightens its grip
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၊ ဘူခါရက်စ်မြို့ ၏အရှေ့ မြောက်ဖက် ၅၇ ကီလိုမီတာအကွာရှိ
အူဇီဆီနီမြို့ မှ E85 လမ်းမကြီး၏ အန္တရယ်များလှသည့် အခြေအနေ...
Perilous: This picture shows the dangerous driving conditions on the E85 motorway near Urziceni city, some 57km north-east from Bucharest, Romania
အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့ ရှိ ရေခဲနေသည့် ရေပန်းတစ်ခုတွင် ကလေးငယ်တစ်ဦး ရေခဲတုံးဖြင့် 
Spray play: A boy throwsablock of ice intoafrozen fountain in Milan, Italy, asacold front continues to affect the country
ဘူခါရက်စ်မြို့ အရှေ့ မြောက် ၇၀ ကီလိုမီတာအကွာရှိ ကိုတော်ကာ ရွာကလေးတွင်
နှင်းမုန်တိုင်းကျစဉ် လူတစ်ဦးစက်ဘီတွန်းကာ ခက်ခက်ခဲခဲသွားလာနေရပုံ...
Up against it: A man pushes his bicycle onasnow-covered road during heavy blizzards near Cotorca village, 70 km northeast of Bucharest
ကိုဆိုဗို ရှိ ရက်စ်တီလီက ရွာကလေးတွင် အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၏ခေါင်မိုးပေါ်တွင် နှင်းများကျကာ
တင်နေပုံက ချစ်စရာကောင်းပေမယ့် နှင်းမုန်တိုင်းကြောင့် လူ ၉ ဦးသေဆုံးကာ ၁ ဦးပျောက်
Frozen in: Houses covered in snow in the village of Restelica, Kosovo, where at least nine people died and one is missing after being struck by an avalanche
ကိုဆိုဗို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် မီးသတ်သမားများ ပျေက်ဆုံးနေသောသူတစ်ဦးအား
ရှာဖွေနေကြပုံ...မြေပြိုမှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၅ လုံးခန့် နစ်မြုပ်ခဲ့ ရတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ က
Tragedy: Members of Kosovo Security Force (KSF) and firefighters search foramissing person at the site where an avalanche hit houses in Restelica. Police said some 15 houses were swallowed up by the landslide
ကိုဆိုဗိုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် သဘာဝဘေးဒါဏ်တွင် သေဆုံးသူတစ်ဦးအား သယ်ဆောင်လာစဉ်
Morbid: Rescuers carry the body of an avalanche victim during the recovery operation in Kosovo
နှင်းမုန်တိုင်းကြောင့် မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားပြီး သေဆုံးသူ ၂ ဦင်္းအားရဲတပ်ဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးမှတ်တမ်း
တင်နေစဉ်...အသက် ၆ နှစ်အရွယ်ရှိမိန်းကလေးတစ်ဦးအား အသက်ရှင်လျှက်ရှာဖွေ
တွေ့ ရှိခဲ့ ပါတယ်...
Macabre: Members of the Kosovo Security Force (KSF) identify two avalanche victims. A girl aged about six was found alive late on Saturday after residents and emergency services helped dig out the houses
၁၉၈၄ခုနှစ် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်တွင် စကိတ်အားကစားပွဲကျင်းပခဲ့ သည့် 
ဘော့ စနီးယားနိုင်ငံ၊ ဆာယာယေဗိုမြို့ ရှိ စကင်ဒါဂျာ အားကစားရုံအား နှင်းများထူထပ်
Crushing weather: View of the Skenderija sports center in downtown Sarajevo, Bosnia, that was used for ice skating events in the 1984 Winter Olympics after it collapsed under the weight of heavy snow
ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ၀ါဆောမြို့ ရှိ ရေခဲနေသည့် ဇလျူးဇက်ဇင်စကီး ရေကန်တွင် စကိတ်စီးသူများ
ပျော်ရွှင်စွာ ရေခဲပြင်ရွက်လွှင့် လျှောစီးနေစဉ်...
Wind in their sails: Skaters and an ice surfer enjoy the frozen Zalew Zegrzynski lake near Warsaw, Poland, as low temperatures holds the country in its grip
သဲမရှိ၊ နှင်းအတိပြီးတဲ့ သောင်ပြင်...
ရောမမြို့ အနောက်ဖက်ရှိ ဖရီဂျင်းန် ကမ်းခြေတွင် နှင်းများကျဆင်းနေမှုကြောင့် သဲများကိုပင်
ရောမမြို့ တွင်လည်းဆီးနှင်းများထူထပ်စွာကျဆင်းမှုကြောင့် တောင်ပေါ်ရှိကျေးရွာများ
အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ကာ၊ လမ်းများပိတ်ဆို့ ခြင်း၊ မီးရထားလမ်းများပျက်စီးခြင်း၊
Where's the sand? A man walks onasnow-covered beach at Fregene, west of Rome. The heavy downfall blanketed the capital Rome, cut off mountain villages and disrupted roads, railways and airports around the country
တစ်မီတာမြင့် သည့် ဆီးနှင်းထုကြောင့် ယဉ်သွားလမ်းများပိတ်ဆို့ ခဲ့ ရသည့် ဆာယာယေဗို
မြို့ ရှိလမ်းတစ်လမ်းတွင် အမျိူးသမီးများသွားလာနေစဉ်...
ထူးကဲစွာအေးခဲမှုကြောင့် ဘော့ စနီးယားနိုင်ငံတွင် လူပေါင်း ၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ ရပါတယ်...
Shelter from the storm: Women walk onastreet in Sarajevo where more than one metre of snow blocked traffic. In total, 13 people have died in Bosnia as the cold spell hit the country
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ယက်ဗ်ပါတိုရီးယား ဆိပ်ကမ်းမြို့ တွင် ရေခဲနေသည့် ပင်လက်နက်ရေပြင်
အား ယခုလအစောပိုင်းတွင်တွေ့ မြင်ရစဉ်...
အအေးပြင်းထန်လှသည့် ရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုကြောင့် နိုင်ငံအနေဖြင့် ယူရိုဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀
( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၆၀ သန်း ) ထိခိုက်နစ်နာ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်များက
Posted by peter kyaw | at 9:27 AM |
မရောက်ဖူးလို့ တခါလောက်တော့ရောက်ဖူးချင်ပါရဲ့း))
နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတလေးတွေပေးတဲ့ ကိုပီတာကို